Ihe mkpuchi mkpuchi ụgbọala nke Silicone maka mercedes benz
Nkọwa:Onye nchekwa nchekwa na Silicone,Cover Cover Protector maka Mercedes,Cover Cover maka Mercedes Benz
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Ihe mkpuchi mkpuchi ụgbọala nke Silicone maka mercedes benz
Ihe Nlereanya.: Mercedes0501
Ubu oke: 3000pcs per days of production
Ebe Mmalite: Guang Dong China (Mainland)
Anyị bụ onye na- emepụta silicone bụ nke na-emepụta mkpuchi mkpuchi ụgbọala . Ahụhụ bara ọgaranya na -eme ka nchekwa nchekwa anyị dị na ya zuru okè, na onye niile na-azụ ya na afọ ojuju maka mkpuchi maka nchekwa mercedes . isi mkpuchi maka mercedes benz bụ otu nke kasị mma n'ire anyị Mercedes Benz Silicone Key Cover n'ihi na ọ na-emetụ aka, centless, enyi na enyi. Ihe mkpuchi mkpuchi Silicone na -achọkwa nnukwu ebe ọ bụ na ọ dị elu na mba Europe. Anyị nwere obi ike na ị ga-ahụ ihe akpịrị na-akpaghị aka na mkpụrụedemede a .
Onye ọ bụla akpịrị akpụkpọ ụkwụ na -agbaso atụmatụ:
2. Igodo mkpuchi Mercedes Benz dị mma maka Benz gị ụgbọ ala 3 mkpọchi igodo.
4. Anyị nwere uru ọnụahịa nke njide ihe mbadamba ụgbọala ụgbọala ma ọ bụrụ na i nwere nnukwu.
6. Ihe mkpuchi mkpuchi nke Silicone nwere àgwà ndị na-adịghị emerụ ahụ, gburugburu ebe obibi, mmegide okpomọkụ, ihe siri ike, mmiri na-adịghị ahụkebe, nkwupụta uzuzu.
Onye na-ejide ụgbọ oloko silcone adịghị emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-ejide ihe mkpuchi mara mma nke mkpuchi maka Benz n'aka gị, ọ na-adị nro, dị ụtọ na ìhè. Ị ga-ahụ n'anya ịchọta isi okwu obere mkpụrụ okwu mgbe ị nwere ya.
Ụdị ọkpụkpọ silicone ọ bụla anyị nwere ike inye karịa 12 agba gị, acha ọbara ọbara, nwa, mmiri na-acha anụnụ anụnụ, acha anụnụ anụnụ, pink, rose uhie, oroma, verdure, apụl akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, isi awọ, kọfị, ọcha na na
ịchọta nkọwa gbasara akpa okwu ụgbọ ala anyị
Isi okwu akpaaka nwere ike ibute ule ime ihe ike
Ọdịdị ahụ dị oke mma ịkwatu
Onyinye mkpuchi silicon mgbe ọkụ na-acha ọcha
Okwute mkpuchi ụgbọ ala Silicone Nkwakọ ngwaahịa na mbupu
Nkwakọba: Nwepu na-ejikọta: mkpuchi mkpuchi ụgbọala ọ bụla na akpa mpempe, akpa akpa ma ọ bụ igbe plastik.
Akara carton: 1000 pc na katọn., Carton size: 58x26x38cm
Na-atụgharị: Site na oké osimiri, Site na ikuku na site na Express (DHL, UPS, FEDEX, TNT etc.)
Ụlọ ọrụ anyị nwere ahụhụ afọ 7 maka ịrụpụta mkpuchi mkpuchi ụgbọala . Kedu ihe ụlọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị ọkachamara maka mmepụta, otu ìgwè ndị nwere ahụmahụ, nkà na ụzụ dị elu, ndị ọrụ nkà na ụzụ, ndị nwere ike ịzaghachi ngwa ngwa ngwaahịa dị iche iche na ngwa ahịa ngwa ngwa.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị, nke ọ bụla na-emepụtakwa, pls hụ nsụgharị nhazi
Ndị na-esonụ bụ Ajụjụ anyị na ụzọ ịkpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma zuru ezu gbasara mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala silicone , ọ bụrụ na ị nwere mmasị na mkpuchi mkpuchi ụgbọala anyị , pls agaghị egbute ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-azaghachi gị oge mbụ, ekele.
Akpa Silicone Car Key maka Fiat 500 Kpọtụrụ ugbu a
Onye nchekwa nchekwa na Silicone Cover Cover Protector maka Mercedes Cover Cover maka Mercedes Benz Akpa nchekwa nchekwa Silicone Onye na-eme ka nchekwa nchekwa nke Silicone Car Onye na-ekpocha ihe dị na Silicone Nchekwa Nchekwa Car Keyboard Silicone Onye na-ekpo ọkụ na Silicone